တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့ တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
စကျတငျဘာ ၅၊ ၂၀၁၉
သတ္တမအကြိမ်မြောက် ထိုင်း-မြန်မာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး 7th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting သို့တက်ရောက်ခဲ့သည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဟွာဟင်းမြို့၊ ဟွာဟင်းလေဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြရာ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရုံးမှ Deputy Chief of Joint Staff ဖြစ်သူ Gen. Choochart Buakhao နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်နှင့် ဇနီး၊ တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်းနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mrs.Suphatra Srimaitreephithak ၊ ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ရေတပ်စစ်သံမှူး Capt. Puchong Praditteera နှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် လေတပ် စစ်သံမှူး Group Captain Pruit Tusesuin တို့က လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုင်း-မြန်မာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့ အကြီးအကဲများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အထင်ကရနေရာ များသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။
သတ်တမအကွိမျမွောကျ ထိုငျး-မွနျမာ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြားအစညျးအဝေး 7th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting သို့တကျရောကျခဲ့သညျ့ တပျမတျောကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနညေ့နပေိုငျးတှငျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဟှာဟငျးမွို့၊ ဟှာဟငျးလဆေိပျမှ ပွနျလညျထှကျခှာကွရာ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ရုံးမှ Deputy Chief of Joint Staff ဖွဈသူ Gen. Choochart Buakhao နှငျ့ဇနီး၊ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ မွနျမာစဈသံ(ကွညျး၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ ခငျဇျောနှငျ့ ဇနီး၊ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျ နှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ နပွေညျတျော အပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျသို့ ပွနျလညျရောကျရှိရာ ဒုတိယတပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ (ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီး တငျအောငျစနျးနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ နပွေညျတျောတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E.Mrs.Suphatra Srimaitreephithak ၊ ထိုငျးဘုရငျ့ တပျမတျောရတေပျစဈသံမှူး Capt. Puchong Praditteera နှငျ့ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျော လတေပျ စဈသံမှူး Group Captain Pruit Tusesuin တို့က လဆေိပျတှငျ ကွိုဆိုခဲ့ကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ထိုငျး-မွနျမာ အဆငျ့မွငျ့အရာရှိကွီးမြား အစညျးအဝေးသို့ တကျရောကျခဲ့ပွီး ထိုငျးနိုငျငံအစိုးရအဖှဲ့ အကွီးအကဲမြားနှငျ့တှဆေုံ့၍ နှဈနိုငျငံ ဆကျဆံရေး၊ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားအား ဆှေးနှေးခွငျးနှငျ့ အထငျကရနရော မြားသို့ သှားရောကျလလေ့ာခွငျးမြား ဆောငျရှကျခဲ့ကွသညျ။